फ्लोरिडा डाटा रिकभरी सेवा | LC प्रौद्योगिकी | डाटा रिकभरी
फ्लोरिडा डाटा रिकभरी सेवा
Home → फ्लोरिडा डाटा रिकभरी सेवा
LC प्रौद्योगिकी डिजिटल मिडिया को सबै प्रकार को लागि डाटा रिकभरी सेवाहरू प्रदान गर्दछ, प्लस हार्ड ड्राइभ पुन:. संयुक्त राज्य अमेरिका को रूपमा’ सबै भन्दा ठूलो फ्लैश स्मृति डाटा रिकभरी सेवा कम्पनीहरु, LC प्रौद्योगिकी पेशेवर गर्न साईट बाट सबैका लागि विशेष सेवा प्रदान गर्दछ. हाम्रो फ्लोरिडा डाटा रिकभरी सेवाहरू डाटा को कुनै पनि र सबै प्रकार ठीक गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं गल्ति डाटा फाइलहरू मेटिएको छ, तस्बिरहरू, भिडियो वा अडियो फाइलहरू तपाईँको मिडिया बाट, ढाँचामा वा लेख्ने प्रक्रिया चलिरहेको बेला मिडिया बाहिर झिकेर? हाम्रो डाटा रिकभरी सेवा तपाईँको फाइलहरू पुन: प्राप्त र आफ्नो डाटा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्छन्.
हाम्रो फ्लोरिडा डाटा रिकभरी सेवाहरू ल्याब सुरक्षित वातावरण सबै ग्राहक डेटा निजी राखिएको हो. नियन्त्रित प्रयोगशाला पहुँच अर्थ मात्र उपयुक्त विशेषज्ञहरु संवेदनशील जानकारी ह्यान्डल. हामीले नियमित रूपमा सरकार लागि वर्गीकृत डाटा रिकभर गर्न अनुबंधित छन्, कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट र निजी संगठनों. LC प्रौद्योगिकी वर्गीकृत कि सामाग्री आवश्यक गोपनीयता र सुरक्षा को स्तरमा accustomed छ. सबै बरामद कागजातहरू स्थायी पछि सखाप छन् 30 दिन.